နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ – ၂၀၁၈ pdf
နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရင်းအနှီးစျေးကွက်၏ အခန်းကဏ္ဍခေါင်းစဉ် ဖြင့် MRTV တွင် အခန်းဆက်အဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ အား အများပြည်သူသိရှိလေ့လာနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-
နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရင်းအနှီးစျေးကွက်၏အခန်းကဏ္ဍ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စီးပွားရေးစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့် ခဲ့ရာ အဆိုပါစကားဝိုင်းတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်း ကြီး ကြပ် ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးဌေးချွန်နှင့် ဒေါ်တင်မေဦး၊ ရန်ကုန်စတော့အိပ် ချိန်းမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းနိုင်ဦး၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ် ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Securities Exchange Centre Co. Ltd.,- MSEC) မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ယဉ်မြတ်မင်းနှင့် TMH Telecom Public Co. Ltd., မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနန်းလဲ့ရည်စိုးတို့က ပါ၀င်ဆွေးနွေးကြသည်။
SOP for Government Securities Trading (For Securities Companies Only)
The purpose of this SOP is to establish effective management and smooth operations with the secondary transaction of government securities.
Bond Market Guide 2018 Myanmar
The ASEAN+3 Bond Market Guide was first published in 2012 as the initial output of Phase 1 of the ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF).1 In addition to an update of the original 11 jurisdictions’ bond markets guides, three new markets were taken up this time. Across the region, economies with nascent domestic bond markets, including Myanmar, have experienced tremendous development over the past5years. Now in Phase 3, ABMF would like to share, in the public domain, information on these developments by publishingaMyanmar Bond Market Guide for the first time.
Corporate Governance Frameworks in Myanmar
This work is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the OECD or of the governments of its member countries or those of the European Union.
This document and any map included herein are without prejudice to the status or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city, or area.
Capital Market in Myanmar
Power Point of 4th Roundtable Meeting
DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)
MIoD membership program 2-fold style Final
MIoD membership program brochure 2019 – April _Aung
MIOD Pamphlet Final
Brochure Board-Company Secretary Program Dec 2019
Board Secretary Batch3Agenda Dec 2019
Brochure_Finance for Directors Dec 2019
Board-Company Secretary Program March 2020
DCP 6th Batch Brochure Mar 2020
Finance for Directors Brochure Mar 2020
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်သည် အများပြည်သူများ အတွက် ငေွချေးသက်သေခံလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အခြေခံအသိပညာများ ရရှိစေရန် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းကျောင်း (၈) ကျောင်းအား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁။ ၂၃-၁-၂၀၁၆ MIND Investment Institute http://www.valueinvestingcollege.com
၂။ ၂၃-၁-၂၀၁၆ Shenton Institute of Applied Finance https://temasekcollege.com
၃။ ၁၈-၃-၂၀၁၆ MFC (Myanmar Financial Center), (Myanmar Certified Training Center) http://www.myanmarfinancialcenter.com
၄။ ၁၁-၃-၂၀၁၆ IMA Institute of Accounting & Finance –
၅။ ၂၈-၄-၂၀၁၆ Myanmar Institute of Business www.mib-edu.com
၆။ ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ Institute of Business and Investment Management (IBIM) -www.ibimmyanmar.com
၇။ ၁၁-၇-၂၀၁၇ Maximax Solution Tutorial and Training Institute http://www.maximaxsolution.com
၈။ ၁၈-၈-၂၀၁၇ Matrix Institute of Professionals (MIP) https://www.matrixinstitute-mm.com